Mashandiro anoita CarPlay muIOS 12 | IPhone nhau
CarPlay ndiyo sisitimu iyo inokutendera iwe kudzora mashandisiro eiyo iPhone yako mumota yako. Ndiine vagadziri vakuru vatove kutora ino system uye Apple ichiwedzera kuvhura chikuva kune vechitatu-bato kunyorera, isu tinoda kukuratidza kuti zvinoshanda sei.
Chengetedze nemirairo yezwi, ine panyama kana kubata zvekubata, verenga WhatsApp yako, uvatumire, famba neMapu, teerera podcast kana mimhanzi, Tinokuratidza mashandiro anoita chikuva chinonakidza icho chinongoda iyo iPhone 5 kana kuti gare gare kuti ishande.
1 Sarudzo dzakasiyana
2 Kudzora kwezwi, zvinokurudzirwa
3 Chinhu chakakosha interface
4 Zvese zviri pane yako iPhone
5 Zvakanakisisa zvichiri kuuya
carplay inogona kunge isina waya kana wired. Muchiitiko chekutanga, iwe haudi chero chinhu, kunze kwekutengesa waya yako iPhone kumotokari yako. Mune wechipiri, iwe uchazoda tambo yeMheni uye chiteshi che USB chinowanzo kuve pane armrest kana padheshibhodhi yemotokari. Kamwe ikabatana CarPlay ichavhura otomatiki uye yayo mamiro epamba skrini ichaonekwa mumotokari yako.
Pamusoro pemamodhi maviri aya, kune nzira mbiri dzekudzora. kuburikidza nekubata skrini kana panyama yekudzora mapfundo. Mune yangu kesi, iyo skrini haina kujeka, saka ndinofanirwa kushandisa vhiri rinotenderera iro rinondibvumidza kuti ndifambe kuburikidza nesarudzo dzakasiyana uye zvinoshandiswa zvinopihwa neCarPlay. Iwo mamamusheni akagadziridzwa zvakakwana zvekuti kuchinja kubva kune imwe kuenda kune imwe kunokurumidza uye kwakananga, nekuti kana iwe uri kumashure kwegumbo haugone kutenga zvinokanganisa.
Kudzora kwezwi, zvinokurudzirwa
Asi chinhu chakanakisa ndechekuti iwe unokanganwa nezve iyo inobata skrini kana pfundo rekudzora, uye kuti wajaira kupa mirairo yezwi kuna Siri. Muchokwadi, chaizvo zviripo kune maficha akaita seWhatsApp ayo asingatenderi iwe kuti uverenge chero chinhu, uye zvese zvinofanirwa kuitwa nenzwi. Iyo ichaverenga ako mameseji uye iwe unogona kuraira mitsva meseji, asi uchigara uchishandisa izwi rako. Ini ndanga ndatojaira kushandisa Siri mumotokari, asi ikozvino zvakatonyanya kudaro.
Kukumbira Siri iwe unogona kugara uchitendeukira kuna "Hei Siri" uye womirira kuti ikupindure, kunyangwe kana mimhanzi ichirira uye paine ruzha rwakawanda senge hurukuro kubva kune vamwe vafambi, haigare ichipindura sezvaunotarisira. Iwe unogona zvakare kushandisa bhatani iwe rauchazove naro padhiraivho yemota yemubatsiri wezwi, kana uchiibata pasi kwemasekondi mashoma Siri anomirira rairo yako. Kuteerera kumumhanzi, podcast, kuverenga kana kutumira mameseji, kana kuikumbira kuti ikutungamire kune kwaunoenda, zvese izvi zvinogoneka zvakakwana pasina kubata chidzitiro kana chero chekudzivirira pfundo.
Chinhu chakakosha interface
Iyo yekushandisa interface iri nyore kwazvo. Nekuda kwemagadzirirwo ayo uye saizi yetsamba, zvinoita sekunge uri kutarisana nechishandiso chisina kunyatsogadziriswa, ikozvino zvatave kujaira kuwanda kwazvo pachiratidziro che iPhone kana iPad, asi hapana imwe nzira yekuzviita. Pane mashoma sarudzo asi anonyanya kubatsira kuitira kuti izvo zvaunoda chaizvo zviri padyo uye haufanire kutambisa nguva yakawanda kupfuura inonyatsodiwa. Iwo odhiyo inoridza mafomu akafanana chaizvo, anonzi Apple Music, Amazon Music, Podcasts kana Spotify. Pano mitemo yaApple yakaoma kwazvo uye ndinofunga ndiyo nzira kwayo.
Zviripachena kuti zviri nyore kwazvo kuibata uchishandisa yekubata skrini pane vhiri rekudzora, asi mushure memazuva mashoma ekudzidzira uye yakapfupika yekufunda curve iwe unozokwanisa kuwana ese mashandiro uye chinja kubva kune chimwe chikumbiro kuenda kune chimwe nekukurumidza. Hongu, ndinoomerera, Sevha vhiri kana sikirini kuitira kana iwe wakamira wakamira uye wojaira kune iko kukurudzira kwezwi pese paunenge uri kuenda, kana mumwe wako achidzidza kushandisa CarPlay uye kusarudza mimhanzi yako.
Zvese zviri pane yako iPhone
Chidzitiro chemotokari yako ichiri girazi reizvo zviri pane yako iPhone, yekutarisa kwekunze. Mota haichengetedze chero chinhu, Iyo haina yayo yekubatana neCarPlay, uye mimhanzi kana podcast iwe yaunoteerera ichave iwo akachengetwa pane yako iPhone kana kushandisa kwayo kubatanidza dhata, chimwe chinhu chauchazofanira kufunga nezvacho kana uchizofamba nepakati penzvimbo idzo kufukidzwa kwacho kusingadiwe.
Iko mukana wekuva neCarPlay netambo ndeyekuti yako iPhone ichagara ichichaja, saka GPS yekumhanyisa kana yekushambadzira haizopedza bhatiri rako mukati merwendo rurefu, zvinopesana. Iyo nguva iwe yaunobvisa iyo kubva kune yayo mheni tambo, CarPlay ichavhara uye iyo system menyu iyo inosanganisira yako mota seyakajairwa ichaonekwa.
Zvakanakisisa zvichiri kuuya
Apple yakazovhura chikuva chayo kune vechitatu-bato mabhurawuza, uye Google Mepu, Sygic uye Waze vakatosimbisa kuti maficha avo anowanikwa muCarPlay apo iOS 12 inotanga. Neruzhinji rwemotokari nyowani dzinenge dzichisanganisira CarPlay, dzimwe dzakatwasuka, chikuva chinoita kunge chichiri padanho rekutanga uye chakanakisa chiri kuuya.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iOS » iOS 12 » Mashandiro anoita CarPlay muIOS 12